ग्यास र पेट्रोल खोज्दै दैलेखको चट्टान चीन लगियो | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home अर्थ ग्यास र पेट्रोल खोज्दै दैलेखको चट्टान चीन लगियो
ग्यास र पेट्रोल खोज्दै दैलेखको चट्टान चीन लगियो
३ असार, काठमाडौं । नेपालमा ग्यास र पेट्रोलको उत्खननका लागि चिनियाँ सरकारको सहयोगमा अध्ययन सुरु भएको छ । चिनियाँ टोलीले दैलेख लगायतका केही स्थानमा पुुगेर नमूना संकलन गरिसकेको छ । अब चीनबाट त्यसको रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र ग्यास उत्खनन् गरिसक्ने बताएसँगै सरकारले पेट्रोल उत्खननलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । के नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन सम्भव छ ? ग्यास तथा इन्धन उत्खननबारे अहिलेसम्म के कस्तो काम भइरहेको छ ? यसै सेरोफेरोमा चिनियाँ टोलीसँगै पेट्रोल खानी खोज्दै दैलेख पुगेर फर्केका उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसँग पुष्प ढुंगानाले गरेको कुराकानीः
ग्यास उत्खनन् गर्नेबारे अहिले के सरकारका तर्फबाट के काम भइरहेको छ ?
दैलेखबाट प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम भइरहेको छ । दैलेखमा ३ सय वर्ष पुरानो ज्वाला देखिन्छ । अस्ति मैले पनि त्यहाँ ग्यास निभाएर फेरि आगो बालेर हेरेँ । त्यस क्षेत्रमा धेरै ग्यास लिकेज भइरहेको छ । त्यहाँका खोलामा पानीका फोका देखिने गरेको छ, त्यो पनि ग्यास बाहिरिएको हो ।
व्यवसायिक प्रयोजनका लागि पुग्ने गरी त्यहाँभित्र ग्यास भण्डार छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउन चिनियाँ टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
कतिजनाको टोली छ ?
पहिलो चरणमा ६ जना विज्ञहरु आएका छन् । उनीहरुले दैलेखमा एक महिनासम्म अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यहाँका चट्टानहरु चाइनाको प्रयोगशालामा लगेर अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरु केही समयमै नेपाल फर्किन्छन् ।
प्रारम्भिक अध्ययनले के देखायो ?
उनीहरुले मलाई दिएको प्रारम्भिक जानकारीअनुसार दैलेखमा ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ छ । चट्टानको प्रकृति हेर्दा ग्यास भण्डार गर्ने खालको चट्टान छ भनेर प्राविधिकले भनेका छन् । ठूलो सम्भावना देखियो भनेका छन् ।
ती चट्टान बाहिर सतहका थिए वा गरेर भित्री भागबाट निकालिएको हो ?
सबैतिरको चट्टान समेटिएको छ । ड्रील गरेर पनि निकालिएको थियो, बाहिरका पनि थिए । उनीहरुले दैलेखमा ग्यासको अतिरिक्त पेट्रोलको पनि ठूलो सम्भावना देखियो भनेर गएका छन् ।
उत्खनन् गर्न सकिन्छ त ?
उत्खनन् गर्न त सकिन्छ । तर एउटा समस्या, त्यो कच्चा ग्यासको भण्डार जमिनको तल्लो भागमा रहेको र लिक भएर (चुहिएर) बाहिर आएको हो कि भन्ने अनुमान गरेका छन् उनीहरुले ।
जहाँ ग्यास देखिएको हो, त्यो निकै उचाइमा भएका कारण यस्तो अनुमान गरिएको हो । अब ड्रिल गरेर ग्यासको स्रोत कति तल छ भन्ने हेरेपछि मात्रै उत्खननको काम शुरु हुन्छ ।
दैलेखको डाँडाबाट ग्यास निकालेर भान्छामा नेपाली ग्यास प्रयोग गर्न सकिने सम्भव देख्नुभएको छ ?
उनीहरु (चिनियाँ प्राविधिक) को रिपोर्टअनुसार मैले त्यो सम्भव देखेको छु । रिपोर्टअनुसार उनीहरुलाई विश्वास गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा भन्दा म ढुक्क छु । मैले प्रधानमन्त्री, पत्रकार, नागरिक समाजलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ, मलाई हरेक कुराको जानकारी देउ भन्दा उनीहरुले अहिलेसम्म ग्यास रहेको पाइएको र त्यसको उत्खनन् गर्न सकिने प्रारम्भिक जानकारी गराएका हुन् ।
उनीहरुले मलाई हामीले देखेको चट्टानको प्रकृतिबाट यहाँ निकै धेरै व्यापारिक सम्भावनासहितको ग्यास उत्खनन् गर्न सक्ने आधार देखेका हौँ भनेका हुन् ।
यो कस्तो ग्यास हो ? भण्डारण गर्न सकिन्छ ?
त्यहाँ भेटिएको ग्यास हामीले खाना पकाउने एलपी ग्यास जस्तै हो । भण्डारण गर्न र ओसार-पसार गर्न सकिन्छ । यसपछि हामी चाँडै मुस्ताङ जाँदैछौँ । मुस्ताङ्गमा पनि निकै सम्भावना रहेको हाम्रो प्राविधिकले बताएका छन् ।
कति वर्षमा हामीले आफ्नै ग्यास बाल्न पाउँछौँ ?
अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण गर्न समय लाग्छ । यदि अनुसन्धानको काम चाँडै सम्पन्न भयो भने दैलेखमा बाहिरिइरहेको ग्यासलाई डेढ वर्षभित्र निकाल्न सक्छौँ । तर, मेशिन ठूलो लाग्ने र त्यहीअनुसार खर्च हुँदा खर्चअनुसारको व्यापारिक प्रयोजनका लागि ग्यास भण्डारण छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने काम भइरहेको छ । त्यो पत्ता लागेको डेढ वर्षमा उत्खननको काम शुरु गर्न सक्छौँ ।
कहिलेसम्म नेपालीले आफ्नै देशमा उत्पादन भएको ग्यास बाल्न पाउँछन् ?
सबै ठाउँको होइन, दैलेखको ग्यास उत्खनन गर्न सकिने सम्भावना छ, ब्लक नं ३ र १० बाट पेट्रोल पनि उत्खनन् गर्न सकिने सम्भावना बढी छ । प्रधानमन्त्रीले २ बर्ष भन्नुभएको हो, चिनियाँ टोलीले हामीलाई साढे २ बर्ष भनेका हुन् । मैले चाँही व्यक्तिगत रुपमा ३ वर्षसम्म सकिन्छ भन्ने गरेको छु । त्यो पनि प्राविधिकले दिएको समयमा ६ महिना थपेर त्यो समय तोकेको हुँ ।
प्रधानमन्त्रीले बढी नै जोड दिएर दुई वर्षभन्दा नकटाउँ भन्नुभएको थियो ।
भनेपछि २ बर्षभित्र इन्धन निकाल्ने प्रधानमन्त्रीको बचन खेर जाँदैछ ?
अहिले त्यसो भन्न सकिन्न । कहीँ कतै निकाल्न सकिन्छ कि भनेर काम भइरहेको छ । हामीले दुई वर्ष धैर्य गर्नुपर्छ । यदि दुई बर्षमा नआएर तीन वर्षमा आए पनि प्रधानमन्त्रीको सपना पूरा हुन्छ ।
ग्यास उत्खनन्का क्रममा कुनै दबाव, हस्तक्षेप केही आएको छ ?
हामी आफ्नो देशभित्रको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन गदैछौँ । मैले तपाईले संकेत गर्न खोज्नुभएको बुझेँ, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै आभाष भएको छैन । हुने कुरा पनि हुँदैन । आफ्नै देशमा ग्यास उत्खनन् गर्ने घोषणा गर्ने क्रममा सामाजिक सञ्जालमा छिमेकी मुलुकलाई जोडेर त्यस्ता चिन्ता आएका थिए । अब त्यस्तो हुनुहुँदैन ।
तपाई कति उत्साहित हुनुहुन्छ ?
मेरो मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो । र व्यक्तिगत रुपमा पनि मलाई बढी चासो छ । मेरो कार्यकालमै ग्यास निकाल्न सकेँ भने मेरो पनि इतिहास बन्ने कुरा हुन्छ, देशलाई पनि धेरै ठूलो फाइदा हुनेवाला छ । यिनै कारण पनि म उत्साहित भएर काम गरिरहेको छु । जति सकिन्छ, छिटो गर्ने कोसिस गरिरहेको छु ।
तपाईको ध्यान ग्यासमा मात्र केन्द्रित हो ?
होइन । इन्धन अर्थात पेट्रोलका लागि पनि मैले जोड दिएको छु । त्यसको पनि काम भइरहेको छ । खानी विभागले नेपालमा १० वटा ब्लकमा पेट्रोलको सम्भावना देखाएको छ । धनगढीको ब्लक नं १ र ब्लक नं २, कणर्ाली ब्लक नं ३, नेपालगञ्ज ब्लक नं ४, लुम्बिनी ब्लक नं ५, चितवन ब्लक नं ६, वीरगञ्ज ब्लक नं ७, मलंगवा ब्लक नं ८, जनकपुर ब्लक नं ९ र विराटनगर ब्लक नं १० गरि १० ठाउँमा इन्धन रहेको भौर्गभिक विभागको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसलाई पनि दैलेख घोषणा पत्रमा समेटेका छौँ ।
थप अध्ययनचाँहि भएको छैन ?
ब्लक नं ३ र ब्लक नं १० मा बढी इन्धन भण्डारण छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । त्यही आधारमा यी ठाउँको थप अनुसन्धानको काम पनि अहिले त्यही चिनियाँ टोलीले गरिरहेको छ । त्यहाँ सम्भावनाका आधारमा चाँडै उत्खननको काम शूरु हुन्छ ।
इन्धनको विषयमा ठोस प्रगति कहाँ पुगेको हो ?
भूगर्व विभागको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर चिनियाँ टोलीले ब्लक नं ३ र ब्लक नं ४ को प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको छ । त्यहाँको माटो पनि चिनियाँ प्रयोगशालामा लगेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यो अनुसन्धान सकिएपछि ग्रिल गरेर थप अनुुसन्धानको काम हुन्छ र यो अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा उत्खननको काम अघि बढ्छ ।
क-कसले पढ्न पाउने ११ कक्षा?